wasiirka Haweenka Itoobiya oo ka hadley xadgudubyada galmada ka dhacey gobalka Tigrey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA wasiirka Haweenka Itoobiya oo ka hadley xadgudubyada galmada ka dhacey gobalka Tigrey
wasiirka Haweenka Itoobiya oo ka hadley xadgudubyada galmada ka dhacey gobalka Tigrey
Ethiopia: Filsan Cabdullaahi Axmed, Wasiirka Haweenka, Carruurta iyo Dhallinyarada iyadoo loo marayo caddeyn buuxda oo la xiriirta xadgudubyada galmada ee lagula kaco haweenka gobolka Tigray.
wareysigii ayaa u qornaa sida tan:
Warbixinta waxaan ka helnay kooxdeena Taskforce ee kusugan gobolka Tigreega, nasiib daro waxay aasaaseen kufsi gabagabo iyo shaki la’aan.
Maaddaama Taskforce ay ku jiraan koox ka socota xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud, oo hadda ka baaraandegaya xogta tiro ahaan, waxaan sugeynaa baaritaanka dambiyadan foosha xun waxaana rajeyneynaa inaan aragno markii dambiilayaasha la horkeenay caddaaladda.
Dowladda Itoobiya kuma koobna oo kaliya, laakiin waxay u ololeysaa ku dhaqanka sharciga mana u dulqaadaneyso wax kasta oo xadgudub ah oo lagula kaco haweenka, gaar ahaan mid kufsi ah.
Waxaan qiimeyneynaa siyaabaha iyo qaababka loo xoojinayo ilaalinta iyo ka hortagga tacaddiyada ku saleysan jinsiga ee lagula kaco haweenka gobolka Tigray.
warbixino Dheeraad ah, waxaan u diyaarinay kooxo taageero maskaxeed, cilmi nafsi iyo bulsho ee gobolka Tigray, si gacan looga geysto daaweynta nabarrada jireed iyo kuwa nafsiyeed, iyo sidoo kale arrimaha kale ee bulshada ee ka dhashay rabshadaha, cabsi gelinta iyo barakaca.
Waxaan ka codsaneynaa bahwadaagtayada caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah iyo daneeyayaasha inay nalaku soo biiraan bixinta adeegyada muhiimka ah iyo ilaha dhaqaalaha ee gobolka Tigray, gaar ahaan xaga caafimaadka maskaxda iyo kaalmada bulshada.
Previous articleWasiirka Gaadiidka XFS oo daah furay barnaamijka cusub
Kenya oo kahadashay khilaafka ka dhexeeya Somaliya
Sirta uu bixiyey Ajanabigii Al-shabaab ka baxay Zubair Al-Muhajir